Maxay ganacsigaagu ugu baahan yahay App | Martech Zone
Maxay ganacsigaagu ugu baahan yahay App
Khamiis, May 9, 2013 Khamiis, May 9, 2013 Douglas Karr
Saaxiibkiis Ryan Cox wuxuu la wadaagay macaamiilkan moobiilka ah ee 'infographic', Ku Fiirso Meheraddaada Macaamilka Kuxiran. Waxaa jira tirooyin taageeraya qaarkood oo aan jeclaan lahaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan of sida in 80% waqtiga isticmaalaha moobiilka lagu qaato barnaamij. Taasi miyay kujirtaa emaylkooda? Waxaan u maleynayaa haa.
Si kastaba ha noqotee, waa muuqaal qurux badan oo qurux badan oo sawir cad ka bixinaya. Waxaa suura gal ah soo laabasho wanaagsan oo ku saabsan ganacsigaaga oo ka fakaraya qaab aad ugu adeegi karto macaamiisheeda ama rajooyinkeeda barnaamijka. Waxaan hadda sii deynay nooca 3 ee Martech Zone app oo aamina inay hadda tahay barnaamijka daabacaadda suuqgeynta mobilada ugu fiican suuqa, mahadsanid shaqada cajiibka ah by Mobilka Postano.
Adeegga Macaamiisha, Biilasha, Is-Caawinta, Waxsoosaarka Warshadaha… waxaa jira tanno siyaabo ah oo aad ugu adeegi karto macaamiishaada dalab moobiil ah. Oo waxaa jira liis soo koraya oo ah qalab is-adeegsi oo la awoodi karo si aad u dhisto barnaamijkaaga mobilada!
Tags: app mobilecodsiyada mobile
Daahiro: Ka Dhigista Daweynta Bulshada inay u shaqeyso Calaamadaha
5 Farsamo Oo Noloshaada Kugu Keeni Karta